Ngwa 6 kachasị mma iji kọwaa ọdịyo na ederede | Gam akporosis
Ignacio Sala | 10/07/2021 14:00 | Ngwa gam akporo
La Ntughari site na okwu gaa na ederede ọ bụghị ihe ọhụrụ. N'ezie, ọrụ a anọnyere anyị kemgbe ihe karịrị afọ 20 (Nkwupụta Dragọn bụ otu n'ime ndị izizi nyere ọrụ a), agbanyeghị n'oge ahụ ọ bụ naanị maka kọmputa n'ihi enweghị ike nke ekwentị nke oge ahụ.
Ọ dabara nke ọma, dị ka teknụzụ enweela ọganihu, anyị nwere ike ikwu n'enweghị nsogbu na taa anyị nwere ike ịme otu ihe ahụ na PC dị ka ama, ọ bụrụhaala na anyị jiri ngwaọrụ kwesịrị ekwesị. N'echiche a, n'okpuru anyị na-egosi gị ngwa kacha mma iji kọwaa ọdịyo na ederede na gam akporo.
Na Storelọ Ahịa Play anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ndị na-azọrọ na ha dị mma maka ịtụgharị audios n'ime ederede. Agbanyeghị, ekpebiela m ịga maka ogo nke ngwa ahụ karịa ọtụtụ. Ngwa niile m gosiri gị n’isiokwu a zuru oke ma dịkwa egwu maka transcribe audio to ederede na-enweghị nsogbu ọ bụla.
1 Ntughari ngwa ngwa
3 Nkwupụta okwu - Okwu ka ederede
4 Okwu SpeechTexter
5 Ebe ọhụụ ọ bụla
Ntughari ngwa ngwa
Otu n'ime ngwa kacha mma gosiri na Storelọ Ahịa Play na-enye anyị ohere iji tọghata ọdịyo na ederede bụ Ntughari Ntugharị. Ezubere ngwa a maka ndị ntị chiri ma ọ bụ ndị na-anụ ihe nke nwere ike iji ekwentị ha na-echekwa nchekwa ma mara ụda ndị gbara ha gburugburu.
The ngwa na-eji akpaka okwu ude usoro na Nchọpụta ụda Google na-eme ederede n'oge na-eziga ọkwa nke mkpọtụ dị n'ụlọ anyị, ka ndị nwere nsogbu ịnụ ntị nwee ike ịmata mgbịrịgba ọnụ ụzọ, mkpu ọkụ, nwa na-ebe ákwá, onye na-ese anwụrụ ọkụ ...
Ntughari ngwa ngwa na-akọwa ọdịyo na ederede na ozugbo ihe karịrị otu narị asụsụ, ọ na - ejide nuances nke okwu (ezigbo iji zere nghọtahie), ọ dakọtara na igwe okwu ngwaọrụ na nke mpụga ma ọ bụ site na eriri ma ọ bụ bluetooth ...
Edere ederede niile maka ụbọchị 3 na ngwa ahụ, yabụ anyị nwere ike ibupụ ha na ederede ederede. Ngwa a dị maka nbudata n'efu ma ọ nweghị mgbasa ozi. Nke a bụ n'ihi Ọ bụ ngwa nke Google kere. Chọrọ gam akporo 5.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Developer: Nchoputa na Google
Anyị na-ekwu okwu ọzọ banyere nkà na ụzụ Google tọghata ọdịyo na ederede. Oge a ọ bụ keyboard keyboard, yabụ ịnwere ike itinye ya na ngwaọrụ gị ebe ọ bụ na ọtụtụ ngwaọrụ gam akporo ndị ruru ahịa gụnyere ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ana m ahapụ gị njikọ iji budata ya.
Agbanyeghị na emere ya maka ntinye anụ ahụ, Gboard Akwado transcript-to-text. Ọ na-arụ ọrụ nke ukwuu dịka Google nyere ya ike, ya mere ọ na-akwado asụsụ 80 na olumba. Ọzọkwa, enwere ike iji ya na-anọghị n'ịntanetị.
Gboard, dị ka ngwa Google niile, dị maka gị budata n'efu Ma ọ bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị ịtụle ma ọ bụrụ na i jiri keyboard ahụ.
Ọzọkwa Ọ bụ n'efu ma ọ nwere ike zuo oke maka mkpa gị.
Nkwupụta okwu - Okwu ka ederede
Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ dee ogologo mkparịta ụka na ederede, dị ka klaasị ma ọ bụ nzukọ, ngwa kachasị mma dị na Storelọ Ahịa Play maka ebumnuche ndị a bụ Speechnotes, ngwa na-enye gị ohere iji igwe okwu ngwaọrụ na ndị ọzọ ejikọrọ site na Bluetooth ma ọ bụ eriri.
Jiri Google olu ude usoro, yabụ anyị agaghị enwe nsogbu na transcripts gafere nsogbu olu nke onye na-eme mkparịta ụka nwere ike iweta. Ejiri ngwa ahụ, dịka m kwuru na paragraf bu ụzọ, iji kọwaa ụda dị ogologo, yabụ ọ naghị akwụsị ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enwere oge nke idere duu.
Iji jiri ngwa a, ama ama anyị aghaghi ịbụ jikwaa gam akporo 6.0 ma ọ bụ karịa, njikọ internetntanetị iji budata asụsụ ndị anyị ga-eji na ngwaọrụ ahụ nwere ọrụ nyocha olu Google.
Nkwupụta okwu dị maka gị budata n'efu ma gosipụta mgbasa ozi. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwepụ ha, anyị ga-eji ojiji nke ngwa ahụ ọ na-enye anyị, onye ọnụahịa ya bụ euro 6,99.
Developer: WellSource - Ikwado Gị
Enwere ike ịchọta ngwa ọzọ dị mma anyị nwere iji kọwaa ọdịyo na ederede na SpeechTexter, ngwa na-akwado ihe karịrị asụsụ iri asatọ ezigbo iji na klaasị, nzukọ yana ijide echiche anyị mgbe mmụọ nsọ malitere.
Speechtexter na-adabere na njikọ intaneti ma Google na-akwado ya. Ihe na - eme ya pụrụ iche bụ nke ya omenala ọkọwa okwu, nke na-enye gị ohere iji nọmba ekwentị pụrụ iche, adreesị, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Speechtexter dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi mana enweghị ịzụrụ ihe n'ime ngwa. Iji nwee ike iji ngwa a, ọ dị mkpa na gam akporo 6.0 na-ejikwa smartphone anyị.
SpeechTexter - Okwu na ederede
Developer: Okwu SpeechTexter
Ebe ọhụụ ọ bụla
Ná mmalite nke isiokwu a, ekwuru m banyere Nkwupụta Dragọn, ngwa nke ihe karịrị afọ 20 gara aga enyela ndị ọrụ PC ohere idegharị ọdịyo na ederede. Ngwa a, nke ụlọ ọrụ Nuance mepụtara (ụlọ ọrụ ahụ dị n'azụ okike nke Siri, onye enyemaka Apple na nke bụ akụkụ nke Microsoft ugbu a) na-enye anyị draịva ebe ọ bụla ngwa na Storelọ Ahịa Play.
Dragọn Ebe ọ bụla lekwasịrị anya na ndị ọkachamara na ọ bụ otu n'ime ihe ziri ezi na ahịa (ịka nká bụ ogo). Iji ngwa a, anyị nwere ike ịmepụta ụdị akwụkwọ ọ bụla naanị site na iji iwu olu, na-enweghị ogologo ma ọ bụ oke oge.
Companylọ ọrụ ahụ na-azọrọ na ọ nwere 99% ziri ezi, ihe nwere ike ịmara ụlọ ọrụ a. N'ịbụ ngwá ọrụ lekwasịrị anya na azụmaahịa ma ọ bụ ndị ọrụ kachasị achọ, iji jiri ngwa ahụ, ọ dị mkpa ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa nke euro 14,99 ma ọ bụ euro 149 kwa afọ.
Ee, anyị nwere ike nwaa ya n'efu maka izu 1 iji chọpụta ma ọ ga-egbo mkpa anyị.
Dragọn Ebe ọ bụla: Ọkachamara Nkọwapụta Ọkachamara
Developer: Nkwukọrịta Nuance, Inc
Otter na-enye anyị ohere dekọọ ma na-edetu nzukọ na / ma ọ bụ klaasị na ozugbo, ka ị nwee ike itinye uche na mkparịta ụka / nkọwa ma jide n'aka na a ga-echekwa ozi ahụ na ngwaọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ejikọrọ na ịntanetị n'oge edere ndekọ ahụ, anyị nwere ike rụọ ọrụ ezigbo oge transcript, ntụgharị nke anyị nwere ike itinye ihe oyiyi ma ọ bụ nye nkọwa. Site na ngwa ahụ n'onwe anyị, anyị nwere ike ịkekọrịta ndị ọzọ ma transcripts na audio ndị edere.
Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere mekọrịta ụdị weebụ nke Otter na akaụntụ Mbugharị na anyị na-eji kọwaa mkparịta ụka ozugbo. Otter na-enye anyị ohere iji ọrụ ntụgharị ya site na Android ma ọ bụ web na 600 nkeji kwa ọnwa n'efu.
Ọ bụrụ na mkpa anyị gafere, anyị nwere ike ịhọrọ atụmatụ Otter Pro yana oke ịgba nke nkeji 6.000 kwa ọnwa. Iji jiri ngwa a, ngwaọrụ anyị ga-abụrịrị jikwaa Android 5.0 ma ọ bụ karịa ma nwee njikọ ịntanetị.
Otter: Nkọwa nzuko, Ntughari, Voice Recorder
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 6 kachasị mma iji kọwaa ọdịyo na ederede